Wararka Maanta: Sabti, Mar 30, 2013-Dadweynaha Soomaaliyeed oo soo dhaweeyay safaradda uu Ra’iisul Wasaare Saacid ku tagayo Gobollada Dalka
Ra’iisul wasaare Saacid ayaa booqasho taariikhi ah oo aan horay u dhici ku tagay magaalada Kismaayo, iyadoo mas’uul dowladeed uusan degmadaas ku tegin tan iyo markii dhacday dowladdii dhexe ee Soomaaliya sannadkii 1991-kii.
Booqashadan ayaa waxay ahayd mid uu ku bixiyay waqtigii ugu badnaa ee uu ku bixiyo booqasho uu ku tagay gobol ku yaalla Soomaaliya, wuxuuna sheegay inuu u kuurgalay xaaladda ay ku nool dadka ku nool magaaladaas iyo howlaha kala duwan ee ka socda. Iyadoo dadka ku nool Kismaayo ay u soo dhaweeyeen booqashadaas.
Ra’iisul waaaraha iyo wafdigiisa ayaa waxay intii ay ku sugnaayeen degmada Kismaayo kulammo la qaateen maamulka KMG ah ee magaaladaas, qaybaha bulshada, ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM oo uu ku ammaanay howsha ay halkaas ka hayaan.
Dadka ku nool magaalada Kismaayo iyo shacabka intiisa kale ayaa muujiyay dareen farxadeed oo ay u qabaan booqashada wafdiga ra’iisul wasaaruhu ay ku tageen Kismaayo, iyagoo sheegay in ra’iisul wasaaraha uu yahay kii ugu horreeyay ee booqda magaaladaas, halka kuwii ka horreeyay ay iska fariisan jireen Muqdisho ama ay u bixi jireen safarro dibadeed.
Booqashada Ra’iisul wasaaraha oo qaadatay saddex maalmood ayaa indhaha dadka Soomaaliyeed kusoo jeedisay sida xukuumadda ay uga go’an tahay u kuur-gelidda xaaladaha dhabta ah ee ka jira gobolada dalka ee dowladda ay ka taliso, taasoo ay dalka intiisa badani ku tilmaameen mid loo baahnaa.
Garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay wafdiga ra’iisul wasaaraha markii ay shalay kasoo laabteen Kismaayo, iyadoo ay soo dhaweeyeen boqolaal dadweynaha reer Muqdisho ah iyo mas’uuliyiinta kala duwan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya.